मेयर धनराज आचार्यलाई शुभचिन्तकको एक पत्र - Parichaya.com
मेयर धनराज आचार्यलाई शुभचिन्तकको एक पत्र
By परिचय	 On ३० जेष्ठ २०७९, सोमबार ११:४९ 0
नेपाल प्रकाश अधिकारी /
मेयर धनराजजी : अभिवादन
औपचारिकतातिर लागिनँ, थाहा छ सन्चै हुनुहुन्छ । पोखराको मेयरको रुपमा तपाईँलाई सर्वप्रथम त बधाईसहित सफल कार्यकालको शुभकामना छ । तपाईँ ताजा मेयर अब सबैको साझा पनि । तपाईँको व्यावसायिक सफलता र लायन्सको नेतृत्व लिँदा गर्नुभएको रचनात्मक कार्यलाई नजिकबाट नियाल्ने व्यक्तिका हिसाबले तपाईँमा सुशासनसहितको थप सुन्दर पोखरा बनाउने दृढ इच्छाशक्ति र क्रियाशिलता छ भन्ने विश्वासका साथ केही योजनासहित यो पत्र कोर्दै छु ।
सफा र स्वच्छ नगर पोखरा निर्माणको पहिलो सर्त हो । झट्ट सुन्दा अलि महत्त्वाकाङ्क्षी जस्तो लाग्ने योजना प्रस्ताव गरेर चिठीको पेटबोली सुरु गर्न चाहन्छु । खेर गइरहेको सेती नदीको पानीलाई लिफ्टिङ या अन्य प्रविधिमार्फत विशेष किसिमका साधन प्रयोग गरेर पोखराका मुख्य सडकहरु समयसमयमा धोइपखाली गरी नेपालमा सर्वथा नौलो तथा रचनात्मक कार्यको थालनी गर्नु हुन अनुरोध छ । त्यसमा पनि, लामो दुरी तथा कच्ची बाटो पार गरेर पोखरा भित्रिने गाडीलाई विजयपुरमा धोइपखाली गरी मात्र प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था मिलाए सुनमा सुगन्ध हुने थियो । आशा छ, नेपालमा धोइने पहिलो नगर पोखरा महानगर हुनेछ, तपाईँको नेतृत्वमा ।
पोखराका हरेक कार्यालयका प्रत्येक कोठाकोठामा सेवाग्राही आफै फाइल लाँदै भौँतारिन पर्ने अवस्था छ । पोखरा महानगरको कार्यालयमा सेवाग्राहीले सुुरुमा एक ठाउँमा फाइल दर्ता गरेपछि काम बनेपछि अन्तिममा सोही ठाउँबाट एकैचोटि बुझ्न पाउने प्रणालीको नवीन र नमुना सुरुवात महानगरको कार्यालयबाट होस् । बिस्तारै अन्य कार्यालयमा समेत सेवाग्राहीले दस ठाउँका कोठाचोटा चाहार्दै हाकिम खोज्न नपरोस् ।
पोखराका हरेक कार्यालयका प्रत्येक कोठाकोठामा सेवाग्राही आफै फाइल लाँदै भौँतारिन पर्ने अवस्था छ । पोखरा महानगरको कार्यालयमा सेवाग्राहीले सुुरुमा एक ठाउँमा फाइल दर्ता गरेपछि काम बनेपछि अन्तिममा सोही ठाउँबाट एकैचोटि बुझ्न पाउने प्रणालीको नवीन र नमुना सुरुवात महानगरको कार्यालयबाट होस् । बिस्तारै अन्य कार्यालयमा समेत सेवाग्राहीले दस ठाउँका कोठाचोटा चाहार्दै हाकिम खोज्न नपरोस् । जसले गर्दा सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबिच अनावश्यक बार्गेनिङ र लनेदेनका लागि अवसरमा समेत कमी भई सुशासनमा टेवा पुग्छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका महङ्गा आधुनिक मेसिनहरु बिग्रिएको अवस्थामा महिनौँ रहन्छन् भन्ने सुन्नमा आइरहन्छ, बिग्रिएको जानकारी समयसमयमा सार्वजनिक गराई मर्मत गरिसकिने अनुमानित समय पनि जानकारी गराउन पाए कति राम्रो हुँदो हो । साथमा, उक्त अस्पतालमा सेवाग्राहीले अनलाइन टिकट काट्न पाउने कहिले होला? कम्तिमा पनि चालक अनुमति पत्र, ब्लु बुक नवीकरणजस्ता काममा पैसा बुझाउन समेत सेवाग्राहीले कामै छाडेर दिनभरि लाइन लाग्ने अवस्थाको अन्त के तपाईँकै पालामा सम्भव छ? आशा छ, हरेक कार्यालयका डाक्टर कर्मचारीले खाजा सिफ्ट मिलाएर खाऊन् । कम्तिमा महानगरमा चाहिँ कार्यालय समयमा विना सूचना तपाईँ उद्घाटन तथा शिलान्यासमा जाने र सेवाग्राही नागरिक बडापत्रको वोर्ड मुनि रुँघेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त होस् ।
काम गर्ने भए सुरु गरी हालौँ, पोखराको मुख्यमुख्य सहरका चोकमा शक्तिशाली सिसी क्यामेरा जडान गरिहालौँ । तपाईँले सारेको फूल जहाँबाट हराएको थियो त्यही परिसरमा क्यामेरा जडान गरेर शुभकार्यको सुरुवात गर्नुहोस् ।
वसपार्कबाट गाडी छुटेपछि तोकिएका ठाउँमा मात्र यात्रु ओराल्ने व्यवस्था होस् । गाडी भित्र भाडासूची अनिवार्य टाँसियोस्, ट्याक्सी मिटरमा चलुन् । पोखरा तुलनात्मक स्तरीय र समृद्ध सहर हो, हामीले खाने तेल कस्तो छ? खाद्यवस्तु अर्थात लत्ताकपडालाई अनावश्यक बढी मूल्य त तिरिएको छैन? प्रष्ट व्याच नं. र लेबलिङ छ कि छैन? अनुगमन होस् ।
पोखरा नगरको आयको ठूलो स्रोत घरभाडाकर हुन सक्छ । प्रत्येक वडासँगको सहकार्यमा भाडा लेनदेनको तथ्यपूर्ण लागत निकालियोस्, कसैले पनि कर छली गर्न नपाऊन् । बाहिरबाट आएर यहाँ पढेका विद्यार्थीले प्रमाणपत्र लिँदा र कर्मचारीले तलबको अन्तिम निस्सा बुझ्दा घरबेटीले चुक्ता गरेको घरबहाल करको प्रमाणित प्रतिलिपि राख्ने प्रबन्ध होस् । भवन सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपूर्व हार्डवेयर एवम् अन्य सामग्रीको तोकिएको न्युनतम् भ्याटबिल अनिवार्य बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाको थालनी भए झनै राम्रो ।
मलाई सधै मनमा उब्जिरहने एउटा प्रश्न छ, फेवातालाको क्षमताले धान्न सक्ने जति लाखौँ माछाका भुरा तालमा छाड्न मिल्छ कि मिल्दैन होला? नमिल्ने भए किन? अध्ययन समिति बनोस्, मिल्छ भने हामीसँग फेवा, बेगनासलगायत थुप्रै तालहरु छन् । हाम्रा दाजुभाइ भेडा चराउन लाखौँ खर्चिएर अरब पुगेर दुःख पाइरहेका छन् । भेडा चराउनकै लागि उनीहरु कहिलेसम्म घरपरिवार छाडेर विदेसिई रहने? हाम्रो देशको कुनचाहिँ पाखा पखेरो व्यवस्थित बाख्रा पालनका लागि अनुकूल छैन, प्रत्येक वडालाई ससर्त अनुदान दिई १ वर्षभित्र तोकिएका खसीपाठा, कुखुरा उत्पादन गर्नै पर्ने ताकेता गरियोस् । महानगरमा पालिने प्रत्येक कुखुराका चल्लाको स्थानीय सरकार मातहत बिमा गरिने योजना आएमा कति ढुक्कसँग व्यवसायीले व्यवसाय गर्दा हुन्? यी कुरामा ध्यान पुर्याएर सिङ्गो प्रदेशलाई माछामासुमा आत्मनिर्भर बनाइयोस् ।
नवनिर्वाचित मेयर तपाईँमा सुशासन सहितको व्यवस्थित पोखरा बनाउने तीव्र हुटहुटी उत्साह छ भन्ने कुरा तपाईँको प्रारम्भिक मन्तव्यमा समेत झल्किएका कारण केही योजना तथा सुझाव पेस गर्ने जमर्को गरेँ । आगे, तपाईँको जो इच्छा ।
अब रह्यो, शिक्षा । सामुदायिक विद्यालयमा दक्ष र तालिमप्राप्त शिक्षक हुँदाहुँदै पनि शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको भनेर धेरै गुनासो आइरहेको छ । यद्यपि पछिल्लो अवस्थामा थुप्रै सामुदायिक विद्यालयले शिक्षण सिकाइमा धेरै फड्को मारेर इच्छाशक्ति हुने हो भने गर्न सकिन्छ भनेर देखाइरहेका छन् । थप सफलता हासिल गर्न गराउन तुरुन्त नगर भरिका सामुदायिक विद्यालयका प्रधान अध्यापकहरुको बृहत्त बैठक बोलाएर आगामी वर्षको अपेक्षित उपलब्धि माग गरी सो उपलब्धि पूरा भए नभएको आवधिक निरीक्षण गरौँ । प्रत्येक तहको परीक्षा पछि पुनः बसेर नतिजा विश्लेषण गरौँ । त्यतिमात्र होइन प्रामाणिक परीक्षा र ती परीक्षामा विद्यार्थीले प्राप्त गरेका उपलब्धिका आधारमा शिक्षक, विद्यार्थी पुरस्कृत गर्ने योजनाको तत्काल घोषणा गरियोस् ।
नेपाल प्रकाश अधिकारी
बजेटमाथिको छलफल रोकेर मलको बारेमा छलफल गर्न एमाले सांसदको माग
शरीर स्वस्थ राख्न हिडनुपर्ने